Malaaq Cali: “Gobolka gogoshiisa in meel kale loo raro ceeb ayay anaga nagu tahay” – Balcad.com Teyteyleey
Malaaq Cali: “Gobolka gogoshiisa in meel kale loo raro ceeb ayay anaga nagu tahay”
Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka iyo odayaal ka tirsan beesha Muddulood, Xildhibaano iyo xubno u dhaqdhaqaaqa maqaamka gobolka Banaadir.
Kulanka ayaa looga hadlay sidii go’aan looga qaadan lahaa hadal dhowaan ka soo yeeray Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo horay u ballanqaaday inuu isagu dhigayo gogosha lagu dhisayo maamulka gobolka Banaadir.
Malaaqa Xamar iyo Xamar Daye Malaaq Cali Malaaq Maxamed Wehliye ayaa kulanka ka sheegay inay ka horjeedaan go’aankaasi, isagoona sheegay in gobolka Banaadir uu isagu yahay gogol isla markaana gudihiisa lagu qabanayo wixii kulamo ah.
“Gobolka gogoshiisa in la raro ceeb ayay anaga nagu tahay” ayuu yiri Malaaq Cali oo sheegay inaan faragelin lagu sameynin maamul kale oo uu ula jeeday degmada Balcad oo hoos tagta maamulka Hirshabelle.
Dhinaca kale waxaa goobta ka hadashay Xildhibaan Drs. Mina Xasan Shibis oo sheegtay inay taageersan tahay go’aankii madaxda Dowladda ee ku saabsanaa maqaamka gobolka Banaadir, iyadoo sidoo kale xubno kala duwan ay ka hadleen aragtiyahooda ku aadan muhiimadda uu leeyahay dhismaha maamul ka madax bannaan Dowladda oo uu yeesho gobolka Banaadir.
The post Malaaq Cali: “Gobolka gogoshiisa in meel kale loo raro ceeb ayay anaga nagu tahay” appeared first on Ilwareed Online.
FAA’IIDOOYINKA CAAFIMAAD EE TIMIRTA LAGA HELO
Xaalad deg deg ah oo la soo rogay magaalada Burco